Dhawunirodha iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus mifananidzo | IPhone nhau
Dhawunirodha iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus mifananidzo
Nepo vashandisi vekutanga vatanga kugamuchira iyo yekutanga iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, iyo yavakachengetera munaGunyana 9, mazuva maviri mushure mekuratidzwa kwavo kwepamutemo, vazhinji vanga vari vaverengi vakatikumbira mapikicha matsva ayo ivo vachatipa iyo nyowani iPhones. Pari zvino Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti kudiwa kwavezve kwakapfuura stock yekambani, chimwe chinhu chakatsamwisa vashandisi vazhinji avo vanga vachitopuruzira maoko avo kuti vakwanise kunakidzwa neiyo nyowani iPhone musi waGunyana 16.
Aya mapikicha matsva haawanikwe mushanduro dzeIOS izvo zviripo pamusika uye tichazongonakidzwa nazvo kana tikatora iyo iPhone nyowani kana Isu tinovatora kubva pane iyi link yandinokuratidza panoperera chinyorwa ichi. Mune ino chinyorwa isu tinokwanisa chete kukuratidza iyo inomira vhezheni yemapikicha matsva, kwete iwo ane simba, iwo akasimba iwo anozofadza vanonyanya kufarira Apple vashandisi.
Sezvo zvirokwazvo iwe watoona kare mune mamwe emavhidhiyo anotenderera paYouTube ane hukama neiyo iPhone 7, aya mapikicha vanotiratidza kudonha kunofamba mumarudzi akasiyana uye neakasiyana mamiriro, kuitira kuti mushandisi wega wega asarudze iyo inokodzera zvavanofarira uye nei zvisingaite, zvavanoda.
Kugadziriswa kwe mashanu mapikicha atinokuratidza, iri 1080 x 1920, iyo resolution yepamusoro yakapihwa neiyo iPhone 7 Plus. Aya mapikicha akakosha kune vese vashandisi vane iyo iPhone 6s kana iPhone 6s Plus vasingaronge kukwidziridza yavo kifaa kune yazvino modhi, nekuda kweiyo mbiri kamera uye kuramba kwemvura, akakosha maficha eiyo nyowani iPhone modhi iyo yaakaratidza iyo kambani munaGunyana 7.
Sezvo siluX inoratidza mune zvakataurwa, iwo mavara emadonhwe aya anogutsurira mavara eiyo yekutanga iMac, modhi yaive zvakare yekutanga pamusika kubvisa mafloppy madhiraivhu senge iyo iPhone 7 ine headphone jack.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Dhawunirodha iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus mifananidzo
Ivo vakaderera padyo nemifananidzo. Nekudzvanya pairi unofanirwa kudzvanya paVona saizi izere kuti uwane iyo yekutanga resolution.
"Kune mushandisi wega wega kusarudza iyo inokodzera zvakanyanya zvavanofarira uye nei zvisingaite, zvavanoda"
JAJAJAJAJA Ini ndapatsanura nezvinodiwa ... ini ndaisaziva kuti mavara anogona kuve akakosha uye anodikanwa. Izvo ndezve fashoni zvakakosha, asi ichiri mukati mekuda.
Iwe unogona kutotaura kuti iwo mavara anoyeuchidza yekutanga Imac iyo ini yandakapa mabasa, izvo zvaireva kubviswa kwetiroppy dhiraivha, yakajeka musoro kusavapo kweiyo jack chinobatanidza, ndatenda.
Iwe wakanyatsonaka munyika. Akange asina kuwa. Ini ndinogadziridza iyo post yako ruzivo.
Huye, iko kuseka! Pane yangu iPhone 7 iro Wallpaper hariuye sedambe kunze kweiyo mhenyu! Chii
Zvakadii ipapo? Pane chero munhu anoziva kana ichiverengerwa mune yekuwedzera kana kwete? Ndatenda!
Ivo havasi mukufamba kwangu, kana zvisiri, saka hurombo.
Ndatenda nekugovana kwavo.
Ini ndinonzwisisa kubva pane zvakataurwa nesiluX, zvinoreva mari, asi ndezvekuti nguva yega yega, vane hupenyu hushoma kana vanozvigadzira vaine nguva shoma nguva imwe neimwe kana kupererwa nemazano, ini handizive.
Dzimwe nguva ndinosuwa iyo dhizaini dhizaini iyo yakaita kuti ibude pachena zvakanyanya kubva kune vamwe vese. Ikozvino, zvine chekuita nemagadzirirwo eazvino interface, haina kupfuura sosi yakapusa kupfuura mamwe ese. Zvinodemba.
Pindura kuna Mostacho
Ufff isingatauri neaya "matsva" mari ...
Mukuratidzwa kweiyo iPhone 6s ivo vakaratidza hupenyu hwakasarudzika hunosanganisira hove dzakasimudzwa kunyanya pachiitiko ichi, ndiko kuti, kutarisisa kuzhinji kwakashamisa. Asi mari idzi chii?
Uye muenzi muenzi wekuvhara kwesainiro? Mai vangu! Chikamu chekutyisa! Iyo boogeyman musikana !!
Iyo yakanakisa hurukuro yakakosha pasina mubvunzo yave iyo ye iphone 6!
Ndine iyo iPhone 7 plus uye iyo mari haiuye. Sezviri pachena Apple yakanganwa.
Ini ndichangobva kutumira ndichibvunza chinhu chimwe chete, ini ndakatenga iyo iPhone 7 Plus uye hapana chiratidzo chemapikicha matsva
Ndinoda kuziva kana zvakajairika kuti ini ndine iPhone 7 Plus uye kuti haina kusanganisira iwo mapikicha matsva. Izvo zvinogona kunge zvichiitika?
Kwazisai uye ndinokuvongai zvikuru
Ndine iyo iPhone 7 uye ini handina mari futi! Chii chiri kuita?
Ini ndakafanana IPHONE 7 PLUS isina mari nyowani ... hapana chimwe chevashambadziri chiri ☹️️
Zvakanaka, ndakaburitsa iPhone 7 uye 7 kuwedzera kubva kuchitoro cheapuro uye hapana kana zvachose. Ivo vanotiseka isu, uye kwete nemidziyo yakachipa chaiyo.
Maitiro Ekutevedzera Mufananidzo kana Vhidhiyo kubva kuKamera Roll pane iPhone kana iPad
Kufananidza pakati peDash, Iyo Musoro wefoni uye AirPods